Pengundi Luar: Singapura Perbetulkan Kenyataan Wan Ahmad, Terbukti SPR Penipu!
မြန်မာရာဇ၀င်လာ သမိုင်းဝင် အိန္ဒိယလူမျိုးများ (၁)
HRW World Report 2013 BURMA
ဦးသာအေး- မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ၏ အခက်အခဲ၊ တာဝန်၊ ပိုင်ခွင့်နှင့် နည်းလမ်းများ
ဒေါက်တာမြင့်သိန်း- မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ၏ အခက်အခဲ၊ တာဝန်၊ ပိုင်ခွင့်နှင့် နည်းလမ်းများ
ကိုမြအေး- မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ၏ အခက်အခဲ၊ တာဝန်၊ ပိုင်ခွင့်နှင့် နည်းလမ်းများ
တရားမျှတမှု လိုလားသည် U Thein Sein, we want Justice
How To Get Your Wheelchair On The Beach
Posted: 01 Feb 2013 06:10 AM PST
Posted: 01 Feb 2013 05:46 AM PST
တရုတ်ရာဇ၀င်မှတ်တမ်းများ၌ ပျူများကို "P' aio" ပအိုဟု မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ သို့သော် ပျူတို့ကမူ သူတို့ကိုယ်သူတို့ Tricul တီကျူးဟု သမုတ်ပါသည်။ တရုတ်ရာဇ၀င်၌ နန်ချိုရှမ်းတရုတ်များနှင့် တိဘက် ပူးပေါင်း၍ တရုတ်ကို တိုက်ခိုက်ခြင်း မှတ်တမ်းများ တွေ့ရပါသည်။ နန်ချိုရှမ်းတရုတ်ဘုရင် Ko-lo-fan ကိုလိုဖင်၏ ပျူများနှင့် ဆက်သွယ်သော မှတ်တမ်းများလည်း တွေ့ရပါသည်။ ပျူဘုရင်များကို မဟာရာဂျာများ၊ မှူးမတ်ချုပ်များကို MAHSINAS မဟာဒီနားဟု မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
(စာညွှန်း D G E HALL "BURMA")
Posted: 01 Feb 2013 06:39 AM PST
Posted: 01 Feb 2013 03:16 AM PST
ကမ္ဘာပေါ်၌ တရုတ်ပြည်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သည် ရှေးအကျဆုံးသော လူမှုအဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ၎င်းနှစ်နိုင်ငံကို ဟိမ၀န္တာတောင်တန်းကြီးက ကာဆီးထားသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ကူးလူးဆက်ဆံရေးမှာ တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲလှပါသည်။
သို့သော် ပထ၀ီသဘောအရ အိန္ဒိယတိုက်ကြီးမှာ အနောက်တောင်မှ အရှေ့မြောက်သို့ ရွေ့လျားပြီး မြန်မာနယ်စပ်၌ တိုက်မိသော ကြောင့် တွန့်ခေါက်တောင်များ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဟိမ၀န္တာတောင်တန်းကြီးမှာ အရှေ့အနောက် ရှိသော်လည်း ၎င်းတောင်တန်းကြီးများ၏ အရှေ့ဘက်ဆုံး တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် မှစ၍ တွန့်ခေါက်တောင်များမှာ မြန်မာပြည်ကိုဖြတ်၍ မြောက်မှတောင် သွယ်တန်းလျက်ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့ ကူးလူးဆက်ဆံရန် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေသော ဟိမ၀န္တာတောင်မှာ မြန်မာပြည်ထဲသို့ ကွေးဝင်ပြီး နိမ့်ဆင်းသွားသဖြင့် တိဘက်နှင့် ယူနန်မှ ရှေးဦးလူများမှာ တောင်ကြားလမ်း၊ မြစ်ချောင်းများအလိုက် လွယ်ကူစွာ မြန်မာပြည်ထဲသို့ ဆင်းသက်လာနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တဖန် ဟူးကောင်းတောင်ကြားလမ်း၊ အမ်းနှင့်တောင်ကုတ်တောင်ကြားလမ်း များမှတဆင့် တရုတ်-အိန္ဒိယ ရွှေလမ်း-ငွေလမ်း ဖောက်လုပ်ခဲ့ကြပြီး ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ကို ဆက်သွယ်ပေးထားသော သဘာဝ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ရပါသည်။
(စာညွှန်း "ပုဂံယဉ်ကျေးမှု" စာမျက်နှာ (၄၂)၊ ပါမောက္ခဦးသန်းထွန်း)
ထို့ကြောင့် အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ခရီးသွားများ၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ၊ ကုန်သည်ပွဲစားများ၊ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သည့် သူများမှာ မြန်မာပြည်အတွင်း၌ တစစ အခြေခံ နေထိုင်လာခဲ့ကြပါသည်။
"Pada 8 Januari lalu, kami ada hantar surat kepada Presiden KTMB, Datuk Elias Kadir melalui tangan dan surat itu sudah diterima dengan terdapat akuan penerimaan pada salinan surat itu sebagai bukti penerimaan.
"Tujuannya adalah untuk mengadakan pertemuan dengan pegawai bertugas untuk mendapatkan sebut harga tapak iklan dan sebagainya seperti mana BN.
"Tetapi malangnya tiada sebarang jawapan dari KTMB," ujar Hannah yang juga merupakan Adun Subang Jaya.
Dilaporkan sebelum ini bahawa Umno-BN menjalankan propaganda politik mereka menerusi iklan 'Sayangi Selangor' di stesen dan gerabak KTMB.
Posted: 01 Feb 2013 01:46 AM PST
Two new laws passed in 2012 related to land use fail to adequately protect farmers' rights. A new law on peaceful assembly—signed in December 2011 and hailed asareform by Western governments—fails to meet international standards, providing for imprisonment for permit violations, and requiring that protest slogans be pre-approved.
The National Human Rights Commission, created in September 2011, continued to disappoint in 2012. The commission exists by executive order and lacks independence from the government, contrary to the Paris Principles—minimum standards endorsed by the UN on the functioning of national human rights commissions. Statements from Burma's commission on Kachin and Arakan States failed to mention any abuses by the state security forces, or government-imposed restrictions on delivering humanitarian aid to tens of thousands of internally displaced persons (IDPs).
After spendingatotal of 15 years under house arrest since 1989, and otherwise facing travel restrictions, Aung San Suu Kyi's right to travel domestically and internationally was restored, and she traveled to five European countries in June, including Oslo to accept her 1991 Nobel Peace Prize. In September she travelled to the US where she accepted the Congressional Gold Medal in recognition of her non-violent struggle for democracy and human rights, awarded in 2008 while she was under house arrest.
Violence erupted again in late October in9of the state's 17 townships, with coordinated violence and arson attacks by Arakanese against Rohingya and Kaman Muslims—a government-recognized nationality group, unlike the Rohingya. In some cases violence was carried out with the support and direct involvement of state security forces and local officials, including killings, beatings, and burning of Muslim villages, displacing an additional 35,000 Rohingya and non-Rohingya Muslims.
Several high-profile visits to Burma in 2012 were ostensibly aimed to show support for ongoing changes, including visits in November by US President Barack Obama—the first byasitting US president—in April by British Prime Minister David Cameron, and UN Secretary-General Ban Ki-moon. President Obama gaveahistoric speech at Rangoon University raising human rights concerns, including the military's role in parliament, ethnic conflicts, national reconciliation, and abuses against Rohingya Muslims. Other high-profile visits were explicitly more economically motivated, including visits in May by India's Prime Minister Manmohan Singh, and in September by China's top legislator, Wu Bangguo, chairman of the Standing Committee of China's National People's Congress.
Posted: 01 Feb 2013 12:09 AM PST
ဒေါက်တာမြင့်သိန်း (မြန်မာမွတ်စလင်မ် ကွန်ယက်)
ကိုမြအေး (၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား များအဖွဲ့)
တရားမျှတမှု လိုလားသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ၊ ၂၀၁၃ M-Media စိန်စံထိုက် (ဟံသာမြေ)
ယခု ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီလ ရောက်သည့်တိုင် ထိုအဖွဲ့မှ တရားခံတစ်ဦး ကိုမျှ ဖေါ်ထုတ် အရေးယူသည်ကို မကြားသိရပါ။
သို့သော်လည်း (၂၄.၉.၂၀၁၂) နေ့ထုတ် (Voice) ဂျာနယ်တွင်
(ကျောက်တော်လူသတ်မှု တရားခံဟု ယူဆရသူ ဘင်္ဂါလီခြောက်ဦးကို ဖမ်းဆီး) ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဖေါ်ပြရာတွင် "ရခိုင် အမျိုးသား ဦးကျော်မောင်ချေ အား သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် (၁၁.၉.၂၀၁၂) နေ့၌ ကျူးလွန်သူဟု ယူဆရသူများကို ပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အရေးယူ စစ်ဆေးလျှက်ရှိကြောင်း ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။"
Posted: 01 Feb 2013 01:16 AM PST
Kita tunggu dan lihat siasatan SPRM.
Apakah langkah SPRM ini telus untuk menyiasat skandal Shafie Apdal-Zahida Rafik atau untuk membersihkan nama Shafie Apdal sepertimana kes lembu NFC dulu.
PETPOSITIVE PICTURE FLASH!
Here'saingenious idea of making beaches and sandy areas accessible to people in wheelchairs.
We'd love to hear from you. Write and tell us what you think. Can you think of other better ideas? What do you think about disabled people's right to access outside areas?
Don't forget to become PET+BLOGSPOT's Follower if you have joined us for the first time.